Caalamka, 23 November 2019
Netanyahu oo dacwado lagu soo oogay
Internet la'aanta ka jirta Iran oo gashay maalintii lixaad
Internet la’aan ka jirta Iran oo looga dan leeyahay in lagu caburiyo dibad-baxayaasha kasoo horjeeda dowladda ayaa galay maalintii lixaad, ayada oo mas’uuliyiinta ay si tartiib tartiib ah usoo celinayaan.
Ra’iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau ayaa shalay galab magacaabay golahiisa wasiirrada oo ka kooban 36 wasiir, taasoo ka badan tii sanadkii 2015-kii.
Dibad-baxayaal kale oo lagu dilay Iraq
Ugu yaraan laba qof ayaa lagu dilay isku-dhacyadii ugu dambeeyey ee magaalada Baghdad ku dhex mara ciidamada ammaanka Ciraq iyo dibad-baxayaasha kasoo horjeeda dowladda.
Oslo: Muran ka taagan masjid ay Soomaalidu maamulaan
Khilaafyo xoogan ayaa ka taagan qaar ka mid ah masaajida lagu cibaadeysto ee qurbaha ee ay maamulaan Soomaalida, gaar ahaan mid ku yaalla magaalada Oslo.
Amnesty: 106 qof oo dibad-baxayaal ah ayaa lagu dilay Iran
Haya’dda xuquuqda Aadanaha ee Amnesty International ayaa sheegtay in ciidamada ammaanka Iran ay dileen ugu yaraan 106 qof, oo qeyb ka ahaa dibad-baxyo ka socday dalkaas tan iyo jimcihii tagay.
Taliban oo sii daysay maxaabiis reer galbeed ah
Kooxda Taliban ayaa sii deysay Talaadadii la haystayaal reer galbeed ah oo muddo dheer ay heysteen, iyagoo fulinaya heshiis ku aaddan maxaabiis is-weydaarsi, waxana dhankooda ay filayaan in loo soo daayo seddex ka mid ah saraakiishooda sar sare.
Dibadbaxyo ka Socda Dalka Iran
Hogaamiyaha sare ee dalka Iiran ayaa Axadda maanta ah taageeray go’aanka ay xukuumadda dalkaasi ku kordhisay sicirka shidaalka, wuxuuna ugu yeeray debedbaxayaasha arrintaasi ka carooday ee banaanbaxyada ka wada dalkaasi iney yihiin “burcad”
Garsoorayaasha Maxkamadda danbiyada caalamiga ah ee Hague ayaa ogolaaday codsi ka yimid dacwad oogayaasha ee ahaa in la furo baaritaan lagu sameeyo danbiyo laga galay dadka laga tira badan yahay ee Muslimiinta ah ee Rohingya ha loo yaqaan ee dalkaasi Myanmar.
Islamic Jihad iyo Israel oo xabad-joojin ku heshiiyey
Kooxda muqaawamada Falastiin ee Islamic Jihad ayaa maanta sheegtay inay joojisay gantaalladdi ay ku garaaceysay Israel, kadib markii labada dhinac ay gaareen xabad-joojin ay ka shaqeysay Masar.
Dibad-baxayaal kale oo maanta lagu dilay Baghdad
Afar dibad-baxayaal oo kale ayaa maanta ku geeriyooday magaalada Baghdad kadib markii lagu dhuftay bambooyinka sunta dadka ka ilmeysiisa, sida ay kooxaha caafimaadka u sheegeen wakaaladda wararka AFP.